MAPCO က ဒုတိယအကြိမ် ရောင်းသော ရှယ်ယာများကိုပါ စတော့အိတ်ချိန်း၌ စာရင်းသွင်းမည်
ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာ့လယ်ယာ စီးပွားရေး အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း (MAPCO)က ဒုတိယအကြိမ် ရောင်းချမည့် အစုရှယ်ယာတစ်သန်းခွဲကျော်ကို စတော့အိတ်ချိန်း၌ ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ဆောင်မည့်အချိန်တွင် ယခုထုတ်ရောင်းနေသည့် အစုရှယ်ယာများကိုပါ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကရှင်းပြသည်။
Foreign fertilizer factory deal signed
Japan-based Mitsui says it will invest 1.2 billion yen (US$10.50 million) to buildafertilizer plant in Thilawa Special Economic Zone in cooperation with Singapore’s Behn Meyer and Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO).
MAPCO to grow quality on 500 acres in coming rainy season
The Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) is planning to plant 5000 acres under rain-fed fields this rainy season under the contract system in Twante, Dala, Kungyangone and Kawmhu townships in Yangon Region to produce pedigree paddy of quality export.
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဂျာမနီ၊ ဂျပန် နှင့် မြန်မာတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်ရန်
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အတွင်း ဂျာမနီအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီ တစ်ခု တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံ တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် လာမည့် ဧပြီလဆန်းပိုင်း အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုး မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ လယ်ယာ စီးပွားရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီ (MAPCO) မှ သိရှိရ သည်။